Gịnị bụ Email Nyocha? Kedu ka o si emetụta mgbapụta? | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 14, 2014 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Enwere otutu nzuzu site na ndị ahịa na ndị ọkachamara IT mgbe a bịara n'ihe gbasara iziga ozi na ntinye igbe. Imirikiti ụlọ ọrụ kwenyere na ọ bụ usoro dị mfe ebe ị na-eziga email… ọ na-enweta ebe ọ kwesịrị ịdị. Ọ naghị arụ ọrụ ahụ - ndị na-ahụ maka ịntanetị nwere ọtụtụ ngwaọrụ ha nwere iji nyochaa isi iyi nke email ahụ ma kwado ya dị ka isi iyi amara tupu emee email ahụ na igbe mbata.
O juru anyị anya na mmelite dị na mgbapụta anyị, ntinye igbe, na arụmọrụ na-esote nke usoro email anyị ebe ọ bụ na anyị na-eme ihe. Ntinye igbe 250ok nlekota oru, nlekota oru ojii na nhazi nsogbu. Nke ahụ metụtara kpọmkwem nloghachi dị elu nke ọma na mmemme azụmaahịa email anyị.
Gịnị bụ Email Nyocha?
Nyocha email bụ usoro nke ndị na-eweta ọrụ ịntanetị (ISPs) ji hụ na ozi ịntanetị sitere n'aka onye ziri ezi. Ọ na - egosi na agbanyeghị ozi email ahụ, gbanye ma ọ bụ mebie ya na njem ya site na isi mmalite ya na onye nnata. Ozi ịntanetị ndị a na-akwadoghị nke ọma na-ejedebe na folda spam nnata. Nyocha email na-eme ka ike gị nwee ozi ịntanetị gị na igbe ozi karịa folda junk.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere DKIM, DMARC na SPF ndekọ etinyere nke ọma nwere ike meziwanye igbe ntinye igbe gị - na - ebute ahịa ọzọ. Na Gmail naanị, ọ nwere ike ịbụ ihe dị iche na ntinye ntinye 0% na ntinye igbe 100%!
Onye nrụnye etinyela ihe omuma a na nyocha email - ọ di mfe nne nne nwere ike ịghọta!
Tags: NyochannapụtadkimDMARCNyocha emailozi nnapụta emailntinye igbejunk iyospamspf